पहिलो त्रैमासमा अभियान लघुवित्तको नोक्सानी बढ्यो
मंसिर २, काठमाडौं । अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण बिहीवार सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको नोक्सानी गत आवको पहिलो त्रैमासको तुनलामा चालू आवको सोही अवधिमा बढेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा रू. २६ लाख ७ हजार नोक्सानीमा रहेको उक्त कम्पनी चालू आवको सोही अवधिमा बढेर रू. ५६ लाख ७९ हजार नोक्सानीमा रहेको छ ।
चालू आवमा कम्पनीको खर्चमा वृद्धि भएकाले र सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा धेरै रकम छुट्याएकाले नोक्सानी बढेको देखिन्छ । गत आवमा कम्पनीले सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. २१ लाख १७ हजार छुट्याएको उक्त कम्पनीले चालू आवको सोही अवधिमा भने रू.१ करोड ७४ लाख९२ हजार छुट्याएको छ ।
त्यसैगरी कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी भने गत आवको तुलनामा चालू आवमा २८३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत आवमा रू. ६७ लाख ३४ हजार खुद ब्याज आम्दानी गरेको कम्पनीले चालू आवको सोही अवधिमा वृद्धि गर्दै रू. २ करोड ५८ लाख ३६ हजार ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १५ करोड २५ लाख रहेको छ भने जगेडामा रू. २४ लाख ८८ हजार सञ्चित गरेको छ ।
चौथो त्रैमासमा अभियान लघुवित्तले रू. १ करोड ८५ लाख नाफा कमायो